उदयपुरकाे एकै गाउँमा २४ कोरोना संक्रमित, विदेशबाट आएका २ युवाले फैलाएको आशंका – Online Nepal
उदयपुरकाे एकै गाउँमा २४ कोरोना संक्रमित, विदेशबाट आएका २ युवाले फैलाएको आशंका
April 22, 2020 264
उदयपुर । प्रदेश–१ मा मंगलबार एकैदिन ११ जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। यससँगै यहाँ संक्रमितको संख्या २४ पुगेको छ। उनीहरू सबै त्रियुगा नगरपालिका–३ भुल्केस्थित नुरी मस्जिदमा बसेका भारतीय र आसपासका बासिन्दा हुन्।यसअघि वैशाख ५ गते ११ भारतीय र उनीसँगै रहेका दुई नेपालीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो। मंगलबार थपिनेमा क्रमशः वर्ष १८, १८, २९, ३३, ४०, ४१, ४१, ५२ र ५८ का पुरुष, वर्ष ३६ की महिला र अर्की उमेर नखुलेकी महिला छन्। उनीहरू भने मस्जिद आसपासका बासिन्दा हुन्।
मस्जिदमा बसेका भारतीय र नेपाली गरी १३ जनामा कोरोना पुष्टि भएपछि त्यस क्षेत्रका बासिन्दा र उनीहरूसँग सम्पर्कमा रहेकाहरूको स्वाब नमुना संकलन गरिएको थियो। त्यसपछि विराटनगरस्थित कोसी अस्पताल र काठमाडौं टेकुस्थित राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला परीक्षण गरिएको थियो।
विराटनगरमा सोमबार र मंगलबार ८ जनामा कोरोना पोजिटिभ भेटिएपछि धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठामा थप परीक्षण गरिएको थियो। विराटनगरमा संक्रमण पुष्टि भएकालाई उपस्थित गराएरै धरानमा परीक्षण गर्दा पोजिटिभ देखिएको हो। उनीहरूलाई मंगलबार एम्बुलेन्समा राखेर धरान पुर्‍याइएको थियो।
सेनाले संकलन गरेको बाँकी तीन जनाको स्वाब भने टेकुमा परीक्षण गर्दा कोराना पुष्टि भएको प्रदेश १ का सामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरेले बताए। ‘प्रदेश १ मा संक्रमितको संख्या २४ पुगेको छ’, मन्त्री घिमिरेले भने, ‘सबै उदयपुरबाट स्वाब संकलन गरी पीसीआर परीक्षण गरिएका हुन्।’
प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला र सेनाको छाउनी अस्पतालबाट आएको चिकित्सकका छुट्टाछुट्टै टोलीले तीन दिन लगाएर ३ सय २१ जनाको स्वाब संकलन गरी लगेका थिए।काठमाडौं लगेको स्वाब परीक्षणमा अझै संक्रमित थपिने सम्भावना रहेको चिकित्सक बताउँछन्। ६९ जनाको स्वाब परीक्षण भने विराटनगरस्थित कोसी अस्पतालमा भइरहेको छ। ९ वटा स्वाब त्यस क्षेत्रमा खटिएका सुरक्षाकर्मीको हो।
भुल्के क्षेत्रमा ५२ घर छन्। प्रहरीले सबै सिल गरेको छ। यस क्षेत्रमा ६ सय जनसंख्या रहेको प्रशासनको तथ्यांक छ।यसअघि मस्जिदभित्र रहेकामा मात्रै कोरोना देखिएकामा मंगलबार भने बाहिरका बासिन्दामै संक्रमण पुष्टि भएको छ। कोरोना कसरी संक्रमण भयो भनेर तनावको विषय बनेको छ। यो खबर आजको अन्नपुर्ण पोष्ट दैनिकमा छापिएको छ ।
Prevजापानमा फेरि एक नेपालीमा काेराेना संक्रमण
Nextप्रहरीका परिवार र छोराछोरीलाई मा’र्छु र का’ट्छु भनेपछि ज्ञानेन्द्र शाही पक्राउ – प्रहरी
के हुन्छ बेलाबेलामा वी र्य नफाल्दा ? यस्तो छ डाक्टरको डरलाग्दो भनाइ !
करिब ५० यात्रु बोकेर क्वारेन्टाइन हिँडेको टिपर कर्णालीमा खस्यो, ३० जना वेपत्ता